Saddex qaybood oo ka mid ah barnaamijka Cawayska Culimada | Gacanlibaaxnews
Saddex qaybood oo ka mid ah barnaamijka Cawayska Culimada
May 31, 2018 - Written by C M
Halkan ka daawada saddex xalqadood oo ka mid ah barnaamijka Cawayska Culimada.
Cawayska Culimada Kulanka 3aad Sh. Maxamed Idiris Axmed
Cawayska Culimada Kulanka 4aad Sh. Cabdiraxmaan Aw Axmed
Cawayska Culimada Kulanka 5aad Sh. Maxamuud Maxamed Xaliike